Mila fiovana sy fanovana… | NewsMada
Mila fiovana sy fanovana…
Nivoaka iny ny vokatra vonjimaika ofisialy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka. Hilamina amin’izay? Andrasana ny voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC)… tompon’ny teny farany. Mandra-pahatonga izay, tsy mahafa-bela ny fitakiana etsy sy eroa: fanafoanana voka-pifidianana amin’ny ampahany na manontolo, fanalana an-daharana ny kandidà izao na izatsy… Hanao ahoana?
Hatramin’ny mialoha ny tena fampielezan-kevitra, tsy hita izay fampiharan-dalàna sy fanasaziana. Nefa nisy ny tsy fanarahan-dalàna, famitaham-bahoaka… Ny fivangongoan’izany rehetra izany no mampiraraka ompana ny fitoriana eny anivon’ny HCC amin’izao? Ady fiady, ala-nenina farany; eny, na eo aza ny filazana etsy sy eroa fa tsy atokisan’ny ankamaroan’ny olom-pirenena firy intsony ny Ceni sy ny HCC amin’izao fifidianana izao.
Ny tsy fifampitokisana aza no hoe anisan’ny nampihena ny taham-pandraisana anjara tamin’iny fifidianana iny: 40,71%, raha ny tatitry ny Ceni. Tsy afa-miala amin’izany na ny mpitondra, na ny mpikarakara fifidianana, na ny mpanao politika, na ny olom-pirenena… ? Miara-dalana amin’izany ny adihevitra sy tolo-kevitra etsy sy eroa ny amin’ny tokony hanovana ny fomba fanaovana politika… tsy mandeha amin’izay izy intsony.
Tsy ny politika no ratsy, fa ny fomba fanaovana azy… mahatonga ny mpanao politika ho ratsy toerana sy endrika ho azy eo imasom-bahoaka. Izay hahazoana toerana fotsiny no be. Firifiry, ohatra, ny kandidà hoe natolotry ny antoko na vondrona politika, nefa nosambotsamborina tetsy sy teroa: tsy manana olona, na atao fotsiny izay hahazoana toerana? Rehefa avy eo mifampitady sy miady… Hanao ahoana rehefa tena handray ny asany?
Ho mafimafy ny fanovana? Na ny fiovana fa ny tena aloha no mila miova… Ela sy lalim-paka ary manenika ny rehetra loatra tsinona ny tarazo ratsy. Hatao ahoana? “Rehefa mafy ny mandroso, dia ireo mafy no mandroso”, hoy ny filoha amerikanina iray izay, i John Fitzgerald Kennedy.